Buugaag ku saabsan Magi. Sheeko iyo sheeko xul ah | Suugaanta Wararka
Mariola Diaz-Cano Arevalo | 06/01/2022 12:00 | Buugaag
Maalinta Boqorrada, maalin dhalanteed iyo maalin carruurta. Tani waa mid xulashada sheekooyin, sheeko iyo sheeko ku saabsan Magi, taariikh iyo dhaqan sii jiri doona.
1 Maalintii Boqorrada. Sheekooyinka Christmas - VVAA
2 Hadiyada Magi - O. Henry, Lisbeth Lisbeth Zwerger
3 Saddexda nin ee xigmadda leh iyo gabadha aan seexan - Daniel Estandía, Óscar Rull, Sara Nicolás
4 Habeenka laba iyo tobnaad - Carmina del Río iyo Sandra Aguilar
5 Olivia iyo warqadda ku socota Magi - Elvira Lindo iyo Emilio Urberuaga
6 Geela Yar - Gloria Fuertes iyo Nacho Gómez
Maalintii Boqorrada. Sheekooyinka Christmas - VVAA
Magac lagu xasuusto oo ka tarjumaya sheekooyinka, sheekooyinka iyo caadooyinka ay waaliddiinta iyo awoowayaashood noo sheegeen, ama aan ku noolayn carruurnimadayada. Tani waxay sidoo kale muujinaysaa kor u kaca sheekada gaaban iyo sheekada bilawgii qarnigii XNUMXaad. Qorayaasha sida muhiimka ah sida Bécquer, Emilia Pardo Bazán, José Echegaray, Valle-Inclan o Azorin Waxay qoreen sheekooyin yar oo Christmas ah kuwaas oo ay ku qabsadeen xusuusta qoyska, waaya-aragnimada ama nolosha adag ee wakhtigaas.
Hadiyaddii Majaajilada - O. Henry, Lisbeth Lisbeth Zwerger
O. Henry waa magaca beenta ah ee William Sidney Porter, Qarnigii XNUMX-aad qoraa Maraykan ah oo leh nolol aad u dhib badan. Waxa uu ahaa wariye iyo shaqaale bangi oo ka mid ahaa shaqooyin kale, waxaana uu dhowr sano ku qaatay xabsiga oo lagu eedeeyay inuu xaday goobtii uu ka shaqeyn jiray. Halkaas ayuu ka bilaabay inuu wax ku qoro sheekooyin gaagaaban, jinsiga kaas oo la tixgeliyo horudhac, oo leh Poe ama Mark Twain.
Halkan waxa uu ka sheekeynayaa sheekada Della iyo Jim, lamaane jacayl ah oo raba inay midba midka kale hadiyad siiyo Christmas. Laakiin waxay ku qasbanaan doonaan inay iibiyaan wax aad u qiimo badan si ay u iibsadaan hadiyadda uu kan kale doonayo. Waxaa tusaale u ah Lisbeth Zwerger, oo ah qoraa Australiya ah oo ku dhalatay Vienna 1954tii oo 1990 ku guulaysatay abaalmarinta caalamiga ah ee Hans Christian Andersen.
Waayo, akhristayaasha of 6 sano iyo ka weyn.
Saddexdii Wax-garadka ahaa iyo Gabadhii aan seexan - Daniel Estandía, Óscar Rull, Sara Nicolás
Kani waa buug madadaalo leh oo loogu talagalay habeenka ugu sixirka badan sanadka kaas oo sidoo kale ah la beddeli karo ilaa saddex geesood. Oo waa in wax walba loo diyaariyo si habeenka boqorku u guuleysto: waa inaad u dirtaa waraaqaha wakhtiga, ka tag kabaha muuqda, u soo bandhig wax ay cunaan martida iyo, dhammaan ka sarreeya, hore u seexo. Laakiin maxaa dhici kara marka gabadhu akhriskeeda aad bay ugu dheregsan tahay oo way illowdaa inay seexato? Waa hagaag, Melchior, Gaspar iyo Baltasar waa inay isticmaalaan dhammaan caqligooda si ay Berta u seexdaan oo ugu dambeyntii awood u yeeshaan inay ka tagaan hadiyadaha aan la ogaan. Su’aashu waxay tahay ma guulaysan doonaan.
Habeenka laba iyo tobnaad - Carmina del Río iyo Sandra Aguilar
Buug aayadda ku qoran taasi waxay ka sheekaynaysaa waxa uu dareemayo Juan inta lagu jiro iyo ka dib Habeenka laba iyo tobnaad. Sheeko cajiib ah oo ay ka buuxaan muusik ujeedaduna tahay in caruurtu fahmaan tafaasiil dheeraad ah oo ku saabsan habeenkan sixirka ah.
Olivia iyo warqadda ku socota Magi - Elvira Lindo iyo Emilio Urberuaga
Halyeyga sheekadani waa Olivia, Kaas oo ka tirsan ururinta magac isku mid ah, oo ay qortay Elvira Lindo, oo loogu talagalay akhristayaasha da'doodu u dhaxayso saddex ilaa lix sano. Markan Olivia taas ayay u malaynaysaa aad bay u adagtahay in warqad loo qoro Magi. Sidaa darteed wuxuu weydiisanayaa awoowgiis caawimaad, kaas oo sharxay sida uu u sameeyay markii uu yaraa iyo waxa la waydiiyay.
Geela yar - Gloria Fuertes iyo Nacho Gómez
Wax kasta oo ay Gloria Fuertes u qortay carruurta waxay ahaayeen guul dhab ah, taasoo ay ugu wacan tahay cusubaanta aayadda, luqaddeeda iyo laxankeeda. Sheekadan waxa uu inagu qaadaa Christmas-ka iyo Magi kuwaas oo u tagaya in ay soo booqdaan Ilmaha oo ay weheliyaan geel gaar ah. Akhristayaasha ugu yar.
Wadada buuxda ee maqaalka: Suugaanta hadda jirta » Suugaanta » Buugaag » Buugaag ku saabsan Magi. Sheekooyin iyo sheekooyin xul ah